Antony 8 Mahatsapa ho toy ny tsy misy anao na aiza na aiza - Blog
Efa nahatsapa ho toy ny tsy misy na aiza na aiza ve ianao?
Tahaka anao fotsiny tsy mety tsara amin'ny olona manodidina anao?
Fihetseham-po mahazatra izay iainan'ny ankamaroan'ny olona farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fiainany.
Indraindray isika dia mety mandalo fotoan-tsarotra tsy maharitra vetivety fotsiny izay ahatsapantsika fa tsy tena afaka mifandray amin'olona.
dragon ball super arc vaovao
Amin'ny fotoana hafa dia mety ho vokatry ny zavatra lalindalina kokoa izay tokony horesahina miaraka amin'ny fanampian'ny matihanina ara-tsaina.
Na izany na tsy izany, ny filàna fananana dia ampahany amin'ny maha-olombelona. Ny olona tsirairay, amin'ny lafiny sasany, dia mila mahatsapa fa mifamatotra amin'ny olona manodidina azy izy ireo.
Raha, amin'izao fotoana izao, dia mahatsapa ianao fa tsy mifanaraka amin'ny olona sy ny toerana manodidina anao, dia azo inoana fa misy antony. Antony iray toy ny:
1. Ny fomba fijerinao izao tontolo izao na ny toetranao dia hafa noho ny mahazatra.
Misy dikany ve izao tontolo izao? Tsy mazàna.
Sarotra ny mamantatra ny toerana misy azy eo amin'izao tontolo izao rehefa iharan'ny baomba tsy an-kijanona avy amin'ny lafiny rehetra ianao avy amin'ny haino aman-jery sosialy, haino aman-jery nentim-paharazana, ny namanao sy ny fianakavianao, na koa ireo mpiara-miasa aminao izay mahatsapa fa tokony hahita an'izao tontolo izao amin'ny fomba fahitany azy.
Tsy ny rehetra no manao, ary tsy maninona. Mila fomba fijery, hevitra ary fihetsika maro samihafa mba hampandehanana izao tontolo izao.
Ny fomba fijery na toetran'izao tontolo izao tsy mitovy dia mety hahatsapa ho mitoka-monina satria mety tsy hahatsapa ho takatra ianao. Ary raha tsy mahatsiaro takatra ianao , tsy hahatsapa ho toa anao ianao.
Ny fomba tsara hanoherana an'io fahatsapana io dia ny fitadiavana olona hafa izay mahita an'izao tontolo izao amin'ny masony mitovy amin'izany. Jereo anaty vondrona, fiaraha-mientana , na toerana ahafahanao mihaona amin'ny olona hafa manana fomba fijery sy fahalianana mitovy amin'izany.
2. Tsy ianao maneho hevitra tsara.
Ny fahaizana mampita mazava izay eritreretinao sy ny fahatsapanao fa lasa lavitra manampy anao hahatsapa ny fanekena sy ny fandraisana anao.
Mety tsy milaza ny eritreritrao indrindra ianao, ny fanirianao ary ny filanao amin'ny fomba mazava sy fohy amin'ny olona manodidina anao. Raha manana filana na zavatra ilaina manokana ianao, dia mila maneho azy tsara amin'ny mpihaino mandray.
ahoana no hahalalana raha mandeha tsara ny daty voalohany
Atsaharo ny fahaizanao miresaka. Saintsaino ny fomba hitenenana zavatra tokony holazaina sy fampiharana, fampiharana, fampiharana. Ny serasera dia fahaizana mila hajaina amin'ny fampiharana rehefa mandeha ny fotoana.
3. Tsy maheno izay ezahin'ny hafa holazaina ianao.
Ny antsasaky ny fifandraisana dia mihaino ary tena mandre izay lazain'ny olon-kafa. Hafa iray hafa tanteraka sy tsy manam-paharoa tokony hivoatra irery ity.
Betsaka ny zavatra holazain'ny olona, ​​fa ny hafa aza mihaino foana miaraka amin'ny finiavana ny hahatakatra. Fa kosa, mihaino izay lazain'ilay olona izy ireo ary avy eo mametraka ny eritreriny, ny heviny, na ny finoany manokana amin'ny tenin'ilay olon-kafa.
Mety hihevitra fotsiny izy ireo fa ny eritreritra, ny fihetseham-po na ny fihetsika sasany dia tohanan'ny antony manosika hafa hafa ankoatry ny kasain'ny mpandahateny voalohany.
Ny fahaizana mihaino dia tsy miankina amin'ny fifandraisana mazava izay afaka manampy ny roa tonta hahatsapa fa takatra ary hahatratra ny marimaritra iraisana rehefa ilaina izany.
Lahatsoratra mifandraika: Ny tsiambaratelo 8 amin'ny fifandraisana mahomby
4. Ianao na ny olona manodidina anao dia miova sy mitombo.
Mitranga ny fiainana. Mandeha ny taona ary miova ny olona, ​​indraindray manatsara ary indraindray miharatsy.
Ny namana sy ny mpianakavy dia tsy fanatrehana tsy tapaka eo amin'ny fiainanao. Rehefa mandeha ny fotoana ary miova ny olona dia mila mandeha amin'ny làlany manokana izy ireo amin'ny farany.
Mety handeha any amin'ny oniversite izy ireo, manambady, na mifindra any amin'ny toerana vaovao hitady ny fiadanan-tsaina sy fahasambarana.
Ho avy ny fanovana na irintsika izany na tsia. Tsy manan-tsafidy amin'izany izahay. Izay isika afaka misafidy ny hanaiky izany fiovana izany ary hiara-hamindra aminy, avelao ny tenantsika hitombo sy hivoatra amin'ny fiainana fa tsy hiady aminy.
Ny vaovao tsara dia misy olona marobe eto amin'izao tontolo izao izay hitondra be amin'ny fiainanao, tahaka ny hataonao amin'ny an'ny azy ireo. Mila mandroso mankany amin'izy ireo fotsiny ianao.
Ahoana no hiatrehana ny fahatsapana ho manirery ary hiatrehana ny fahatsapana ny fitokanana
9 Famantarana ny faharanitan-tsaina ambony ara-tsosialy
Ahoana ny fomba hanatsarana ny finamanana akaiky kokoa amin'ireo efa miaraka aminao
Ahoana no fomba hahitana namana rehefa olon-dehibe: mahita sy mitombo finamanana vaovao
Ahoana no hahasambatra irery: toro-hevitra 10 momba ny fiainana sy ny tenanao irery
Raha Zanak'olon-tokana ianao dia ho azonao ireo tombony 9 ho lasa iray
5. Ianao na ny olona manodidina anao dia raikitra sy mihitsoka.
Ny fahasosorana amin'ny fahatsapana mihitsoka na mijanona tampoka dia mety hiteraka fahatsapana mitokantokana sy manirery. Mety ho zavatra avy amin'ny fifandraisana tsy misy fitiavana ka hatramin'ny asa iray izay tsy manome fahafaham-po fotsiny.
Ankoatr'izay, raha ianao ilay karazana olona liana amin'ny fitsangatsanganana na fientanam-po, dia hahatsiaro ho mitokantokana kokoa ianao raha mahatsiaro ho kivy na tsy taitaitra.
Indraindray, tsy maintsy miala amin'ilay rongo fotsiny ianao dia afangaro kely ny zavatra! Angamba izao ny fotoana hanovana asa, ny haka fialamboly vaovao, ny fitsangatsanganana an-dàlana, na koa ny fitsangatsanganana any ivelany - na inona na inona hampihena kely ny monotony ary hahazo rivotra madio.
Fomba 10 hanovana an'izao tontolo izao
6. Mety manana olana ara-pahasalamana ara-tsaina ianao izay mila adiresy.
Ny National Alliance on Mental Illness dia nanombana fa olon-dehibe 1 amin'ny 4 no miaina miaraka amin'ny aretin-tsaina voan'ny aretina.
Misy aretina ara-tsaina sasany izay afaka mandray anjara amin'ny fahatsapana fa mitokana ianao na irery. Ny fanahiana ara-tsosialy, ny fahaketrahana ary ny aretina ara-tsaina hafa dia mety hahatonga ny olona iray hahatsapa fa tsy takatry ny sain'izy ireo ary toy ny hoe mijoro tanteraka izy ireo irery amin'ny tontolo feno olona.
Ny vaovao tsara dia ny olana ara-pahasalamana maro azo atrehana sy resena! Ny olona iray dia mety mahita fa mahasoa ny fitsaboana, afaka mianatra fomba fitantanana sy mampihena ireo fahatsapana ratsy ireo, na mety mila zavatra bebe kokoa.
Raha maharitra na mafy ny fahatsapanao ny fitokanana, tsara raha miresaka amin'ny mpanolo-tsaina momba azy ireo ianao. Mety ho afaka hanampy anao hamantatra ny loharanon'ireo fahatsapana ireo izy ireo ary hahita fomba hanatsarana azy ireo.
7. Mety hipetraka amin'ny faritra tsy mendrika kolontsaina ianao.
Hainao ve fa? Ny olona sasany dia mahatsapa fotsiny fa tsy an'ny faritra sasany. Ity dia miditra amin'ny faritra marefo izay ahafahan'ny fihetseham-po mihazakazaka avo sy samy hafa mandika an'izao tontolo izao amin'ny fomba samihafa.
Olona malala-tsaina mety tsy hanao tsara amin'ny vahoaka be saina mihidy. Angamba ianao mijery, miakanjo, na manao zavatra amin'ny fomba hafa tsy mitovy amin'ny olona ao amin'ny fiaraha-monina misy anao, ka tsy mifanentana amin'ny fiaraha-monina.
Ny fanovana ny toerana sy ny tontolo iainana amin'ny iray hafa mifanaraka amin'ny maha-olona anao dia mety milamina! Tsy misy ny tena antony handaniana ny fiainany amin'ny fahantrana sy ny tsy fahasambarana, miaina amin'ny toerana izay mety hahatsapany ho voahilikilika na tsy tiana izy ireo.
Tsy maninona ny maha-ianao anao ary mahatsapa ny zavatra tsapanao, saingy mazava ho azy, mety tsy hanaiky izany ny olon-drehetra eto an-tany. Safidy tsara kokoa ny mifindra any amin'ny toerana misy olona ekena kokoa.
Lahatsoratra mifandraika: Fanontaniana 24 hapetraka alohan'ny hamelanao ny zava-drehetra hanomboka fiainam-baovao
8. Mety tsy dia mandray tsara ireo fotoana manodidina anao ianao.
Betsaka loatra ny olona mieritreritra fa ho avy tsy ho eo am-baravarana ny namana sy ny fotoana mety.
Tsy hitranga izany.
Tokony ho vonona ny hametraka ny tenanao any ianao raha te-hanatratra na inona na inona, na ny fanaovana namana vaovao, ny fahazoana fanekena, ny fahalalana zava-baovao, na ny fivelarana asa.
Ankoatr'izay, ny olona dia manana fahazaran-dratsy manadino ireo fotoana mety ho eo anoloany. Angamba ireo olona izay tsy mitovy aminao no manandrana mandray anao araka izay tratrany.
zavatra tokony hatao amin'ny namanao akaiky indrindra
Tsy ny olon-drehetra no hahatakatra anao na ny fomba tianao hiainana ny fiainanao ary mety tsy azonao ny an'ny azy ireo. Ny fiezahana hampifandray ny elanelana amin'ny fomba tsy mampandefitra ireo ampahany manan-danja indrindra aminao dia fomba tsara hahitana fifandraisana amin'ireo olona hafa.
Afaka miala voly amin'ny olon-drehetra ianao, raha misokatra sy mandray azy ireo.
Mihoatra ny sakana ara-tsosialy marobe ny tsiky sy ny hehy.
Tsy azonao antoka hoe inona no hatao amin'ny fahatsapana manjavozavo fa tsy anao? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao mandritra ilay fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
ohatrinona ny vidin'i dr dre
tsy tsapako hoe ato aho
famantarana fa miraharaha izy nefa matahotra
ny fomba fatokisana ary tsy hiraharaha izay eritreritry ny hafa
zavatra tokony hatao rehefa tena leo
ny fomba ilazana amin'ny namanao fa tianao izy ireo